Vaovao - Inona ilay varavarankely sy varavarana Upvc?
1. Tantaran'ny varavarankely sy varavarana
Fitaovana hazo - Varavarankely vy - Varavarankely varavarankely - Varavarankely Upvc varavarana - vavahady winodws alim-baravarankely.
Nandritra ny taona maro ny vokatra fitaratra sy varavarana dia vita tamin'ny hazo, ny hany fitaovana azo ampiasaina amin'ny fotoana.
Ny trano fonenana lehibe kokoa sy ny varavarankely ara-barotra maro dia vita tamin'ny vy, fa ny fatiantoka an'ity famolavolana varavarankely ity dia ny tsy fisian'ny toetr'andro, noho izany dia somary feno fotaka ireo varavarankely.
Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, ny alika aluminium namboarina ho an'ny famokarana fiaramanidina dia napetraka amin'ny vokatra varavarankely sy varavarana.
Ny Aluminium dia natsofoka tao anaty mombamomba azy isan-karazany, avy eo namboarina ho zana-kazo varavarankely sy fehikibo, avy eo nopetahany vera. Ny varavarankely aluminium voalohany dia tsy lafo, mora apetraka ary mateza ihany, saingy tsy dia nahomby.
Mba hanamboarana varavarankely vita amin'ny aliminioma dia ilaina ny faritra iasan'ny orinasa lehibe, faritra feno tsofa fanapahana, milina fanaovana fikosoham-baravarankely, milina fanodinana zorony zoro, paompy famonoana, famatrarana rivotra ary basy visy vita amin'ny rivotra, fitambarana fametahana mamirapiratra ary ireo milina mpanohana hafa toy ny latabatra , glazing tsipika sy ny toy izany.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny vanim-potoana, ny fanatsarana ny vinylchloride poly tsy plastika (uPVC) dia namindra ny indostrian'ny varavarankely ho amin'ny andro maoderina.
UPVC dia esorina, toy ny aliminioma ihany, fa ny asa fitrandrahana dia tsy mitaky pression extrusion goavana sy mafana ary mandany angovo hampafana ny volafotsy alimo hatramin'ny 1,100 degre F.
Fa kosa, pvc ranon-javatra iray dia voahidy hamono anaty rano, izay hampangatsiatsiaka azy ary hanjary ho profil teo am-baravarankely, izay rehetra amin'ny faritra somary lehibe kokoa noho ny garazy iray.
Ny fanodinana ireo piraofilina uPVC ho singa ao am-baravarankely dia tsy mitaky milina fanoratana be loatra, masinina fanaovana milina ary fitaovana hafa.
Mitsa-saw fotsiny, fa milina fanapahana loha roa, ary milina famafazana fifandraisana.
Amin'ny ankapobeny, fiasa mahomby amin'ny angovo. Matetika ny glazing dia "karazana an-dranomasina", izay gasket malefaka dia fonosina manodidina ny sisin'ny vatan'ny vera, avy eo atambatra sy aforitra manodidina azy ity takelaka fehin-kibo ity, mamorona fehiloha misy porofo mandaitra ary avy eo dia napetraka ao ny baravarankely.
Any amin'ny fehikibo fehikibo, toy ny zana-baravarankely, ny fitaratra dia "milatsaka", amin'ny fampiasana gasket sy vakana manomeza-maso mba hitazonana ny vata fitaratra ao anaty fehikibo.
Noho ny fahatsoran'ny fanamboarana ny fanamboarana varavarankely uPVC dia mety ho vita amin'ny sehatra eo an-toerana. Mpanamboatra varavarankely maro no nanomboka nanamboatra ny varavarankelin'izy ireo. Ny mombamomba ny uPVC, ny fitaovana am-baravarankely, ny fitaratra ary ny singa hafa dia omen'ny extruder uPVC, miaraka amin'ny volavolan-tsolika fa nahazo alalana hamokatra ny mpanamboatra.
Ny ankamaroan'ny teknolojia uPVC dia natomboka tany Eropa, niaraka tamin'ny UK sy Alemana nitarika ny firosoana nankany Upvc windows. Any Etazonia, natsangana ireo mpanondrana uPVC ary nifindra haingana ho eo amin'ny laharana voalohany amin'ny indostria.
Ary koa ny tombony amin'ny famokarana, ny fikandrana Upvc dia manolotra fahaiza-mamolavola, hatsaran-tarehy, faharetana, tanjaka, fanoherana ny toetr'andro, fanoherana ny rivotra, porofon'aretin-kery, fanoherana ny harafesina sy afo. Ary koa, mampihena ny famindrana feo izy ireo ary azo averina madiodio ary tsara ekolojika. Mila fikojakojana kely na tsy misy izy ireo, ankoatry ny fanadiovana ary mahatratra 30% mahomby kokoa noho io hazo na aliminioma io.
2. Ireo vinavinan'ny varavarankely Upvc
Amin'ny ankapobeny, amin'ny fanaovana varavarankely na fanaovana varavarana, dia misy antony telo lehibe io:
2.1 Masinina: ho an'ny fanapahana, welding, fandavahana na famolavolana profil upvc.
Ny milina rehetra ilaina mifatotra araka ny manaraka, Fabricator mila misafidy araka ny drafitra (factory output, budge, factory size habe).
Masinina manapaka (upvc & aluminium)
Masinina welding (upvc)
Masinina manapaka vakana mihaja (upvc)
Masinina notch V (upvc)
Mullion fanapahana milina (upvc)
Masinina fanodinana mullion (upvc & aluminium)
Masinina crimping Corner (aluminium)
Masinina fanodinana rano (upvc)
Masinina fandefasana router (upvc & aluminium)
Masinina fanadiovana ho an'ny zoro (upvc)
Masinina miondrika Arch (upvc)
2.2 Profile: fitaovana am-baravarankely, ampidirina ao anaty ny rindrina (ny ampahany miraikitra amin'ny rindrina), fehy (afaka manokatra sy manidy ny ampahany), ary vakana hafa manelatselatra (ny ampahany manamboatra ny fitaratra), mullion (ilay ampahany manohana ny varavarankely & varavarana) sns .. Fabricator dia hividy ny fitaovana arakaraka ny takiany.
2.3 Fitaovana finday: ny ampahany hampifandraisana & hanidy hidy sy fehikibo.
Ny Fabricator dia mila misafidy fitaovana arakaraka ny karazana varavarana sy ny habeny.
3. Karazana varavarankely sy varavarana
3.1 Karazana fikandrana
varavarankely mihantona ambony
mitongilana & mihodina varavarankely
3.2 Sary karazana varavarankely
Mihodina sy mihodina
Casement anatiny (fehikibo indroa)
3.3 Karazana varavarana